Mariela Carril | | ကမ္ဘောဒီးယား, ယေဘုယျ, အာရှခရီးသွားခြင်း
El ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အင်ဒိုချိုင်းနားကျွန်းဆွယ်၏တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည် အရှေ့တောင်အာရှရှိခရီးသွားည့်သည်များအများဆုံး.
စျေးဝယ်လာရင်ကမ္ဘောဒီးယားဆိုတာသိဖို့လိုတယ် ၎င်းသည်ထိုင်းကဲ့သို့စျေးဝယ်စင်တာမဟုတ်ပါ။ဥပမာအားဖြင့်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နေဆဲအိမ်မှာအမှတ်တရလက်ဆောင်များနှင့်လက်ဆောင်များယူဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။ မေးခွန်းဖြစ်ပါသည် ဘာဝယ်ရမယ်၊ ဘယ်မှာလဲ ဒါကြောင့်ဒီအကြံပြုချက်များကိုသတိပြုပါ။
2 ကမ္ဘောဒီးယားမှာဘာ ၀ ယ်ရမလဲ
ကမ္ဘောဒီးယား အခြေခံအဆောက်အအုံများမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုမဟုတ်ပါ သင့်ရဲ့အိမ်နီးချင်းအချို့ရှိသည်။ ကြီးမားသောကုန်တိုက်ကြီးများသို့မဟုတ်မိုးမျှော်တိုက်ကြီးများကိုစတိုးဆိုင်များရှိသည့်နေရာတွင်သင်မတွေ့ရပါ ဒါကြောင့်အများအပြားစျေးကွက်ရှိပါဘူး လက်မှုပစ္စည်းတွေ ၀ ယ်တဲ့အခါမှာဒါကအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုပါ။
သင်သိသင့်တဲ့ဒုတိယအချက်ကသင်လိုချင်လျှင်ဖြစ်သည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ဒေသခံတစ် ဦး ကဲ့သို့ဈေးဝယ်ထွက်ပါ။ သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏စွန့်စားမှုကိုနှစ်သက်လျှင်ဒေသခံစျေးကွက်နှင့်စျေးဆိုင်ငယ်များသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်ကိုနှစ်သက်ပါကစျေးဝယ်စင်တာများသို့သွားပါ။
ဦး တည်ရာနှစ်ခုအကြားကွာခြားချက်မှာစျေးနှုန်းဖြစ်သည်။ စျေးဝယ်စင်တာများအတွက်စျေးနှုန်းများပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြသည် သင်ဘာမှထုပ်လို့မရဘူး ကြီးမားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအတွက်ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်သည်စျေးကွက်ကိုမလွတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားမှာဘာ ၀ ယ်ရမလဲ
၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ၍ အစိုးရများနှင့်အချို့သောအဖွဲ့အစည်းများသည်ကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူများကိုလက်မှုပညာနှင့်ရက်ကန်းသူများအဖြစ်သူတို့၏စွမ်းရည်များကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရန်အားပေးခဲ့သည်။
အတော်များများကပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်များကိုတီထွင်ခဲ့ကြသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောအမျိုးသားရေးလက်မှုပညာဖွံ့ဖြိုးနိုင်ခဲ့သည် ဝါဂွမ်း၊ ရွှံ့စေးသို့မဟုတ်သစ်သားထည်များထုတ်လုပ်ခြင်း။
ဤဒေသတွင်းလက်မှုပညာအတွက်ဤမက်လုံးပေးအစီအစဉ်များသည်စျေးကွက်နှင့်စျေးဝယ်စင်တာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည့်အရာများဖြစ်သည်။ ပရိဘောဂ၊ အဝတ်အထည်၊ အိတ်၊ အိတ်၊ ပန်းချီကားများ နှင့်အများကြီး
ဒီရန်ကဆက်ပြောသည်နေကြသည် ရှေးဟောင်းပစ္စည်း, Las မီးရှူးတောင်းများ, အကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသော ကွမ်းသေတ္တာများ, Las အဖိုးတန်ကျောက်များ, Las ဆန်စက္ကူအလှဆင်အဆိုပါ ငွေထည်ပစ္စည်းများ၊ ဂန္ထဝင်ဗုဒ္ဓပန်းပုများပုံတူပွားခြင်း နှင့် ဆေးရုံ krama သောခမာလူမျိုးတို့ကယက်နေကြသည်။
သင်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိမည်သည့်မြို့သို့မဟုတ်ဒေသပေါ်တွင်မူတည်သည်အခြေခံအားဖြင့်မြို့တော်ဒါမှမဟုတ် Siem Reap မှာ။
မြို့တော်ကစကြရအောင်။ အမည်ရှိ nom ကလောင် ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုရေးထားတာလည်းတွေ့နိုင်တယ် ဖနွမ်းပင်။ ပြင်သစ်ကိုသိမ်းပိုက်သည့်အချိန်တွင်အင်ဒိုချိုင်းနားတွင်အလှဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။
စျေးဝယ်ခြင်းသည်မတူကွဲပြားသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကစျေးကွက်သုံးခုရှိသည် ပြီးတော့သေးငယ်တဲ့စျေးကွက်များနှင့်နေ့စဉ်စားသုံးသူများရောင်းချတဲ့အခြားရိုးရာစျေးကွက်များ။ အဲဒီမှာလည်းရှိပါတယ် အမျိုးမျိုးသောစျေးဝယ်စင်တာများ, အသေးစားစျေးကွက်, အထူးကောင်းမွန်သော စျေးကွက်များ၊ ပိုးဆိုင်များ၊ အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များ၊ နှင့်အမျိုးမျိုးသောစီးပွားဖြစ်ဝုဏ်။
စျေးနှုန်းများများသောအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၌ရှိကြ၏ နှင့်ယနေ့စတိုးဆိုင်အများအပြားအကြွေးဝယ်ကတ်ကိုလက်ခံပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမြဲတမ်းပိုက်ဆံပြောင်းဖို့အဆင်ပြေပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သေးငယ်တဲ့စတိုးဆိုင်များတွင်ရှိသောကြောင့်။
El ညစျေး nom ကလောင် ၎င်းသည်မြစ်ကမ်းပါးတွင်တည်ရှိပြီးအမှတ်တရပစ္စည်းများ၊ လက်မှုပစ္စည်းများ၊ အဝတ်အစားများနှင့်သိချင်စိတ်အမျိုးမျိုးကို ၀ ယ်ရန်အလွန်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်။ သောကြာနေ့များနှင့်စနေ၊ တနင်္ဂနွေညနေ ၅ နာရီမှသန်းခေါင်အထိဖွင့်သည် (Sisowath Quay,5and 106 ကြား) ။
El အိုလံပစ်စျေးကွက် ဒါဟာအိုလံပစ်အားကစားကွင်းနှင့်နီးစပ်သူနှင့် လက်ကား ဒါကြောင့်ဒေသခံတစ် ဦး အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ သင်ရှာလိုရသည် အထူးလျှော့စျေး ဒါကြောင့်အကြံပြုသည်။
El ရုရှားစျေးကွက် လက်မှုပညာ၊ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၊ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ၊ သစ်သားပန်းပုများ၊ ပိုးထည်များနှင့်အဝတ်အထည်များကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချသည်။ ၎င်းတွင်လက်ဝတ်ရတနာများကိုလည်းရောင်းချသော်လည်းသင်သည်အတုနှင့်အကောင်းကိုမည်သို့ခွဲခြားရမည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
စျေးဝယ်စင်တာများနှင့်ပတ်သက်။ ရှိသေး၏ ကောင်းမွန်သော စူပါမားကတ်တိုင်းပြည်အတွင်းအကြီးဆုံးကွင်းဆက်။ ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုလည်း၎င်း၏ဌာနခွဲအားလုံးတွင်တွေ့နိုင်သည်။
El ကုန်တိုက် ဆိုရီ ၎င်းသည်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်စျေးဆိုင်များစွာနှင့်အတူဆယ့်နှစ်ထပ်ပါသောအနောက်ပိုင်းပုံစံအဆောက်အအုံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၆၃ ကြိမ်မြောက်လမ်းပေါ်တွင်ရှိပြီးဗဟိုစျေးကွက်မှတစ်နေရာတွင်ရှိပြီးနံနက် ၉ နာရီမှညနေ ၉ နာရီအထိဖြစ်သည်
စတိုးဆိုင်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ များစွာသောသူတို့ကိုအကြောင်းကြားရန်မဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ငါကသင်ပြောပြလိမ့်မယ် ဆိုင်အများစုသည် Central Market ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသည်၁၇၈၊ ၂၄၀၊ ၅၁ နှင့် ၂၈၂ လမ်းများ၏inရိယာတွင်။
သူတို့ကခရီးသွား Buddh ည့်သည်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာပန်းပုများ၊ ပိုးများ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ C.ရာဝတီ Artisan, Kashaya ပိုး, Bliss, Lezard အပြာရောင်နှင့် ပိုးစာ ကုန်ဆိုင် သင်လည်ပတ်နိုင်သောစတိုးဆိုင်အချို့ရှိသည်။
၀ ယ်ခြင်းအပြင်သင်ကူညီလိုလျှင်သင်သွားနိုင်သည် Rehab ယာဉ် ကမ္ဘောဒီးယား မသန်စွမ်းသောကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးများပိုင်ဆိုင်သည့်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
သူတို့သည်ငွေလက်ဝတ်ရတနာများ၊ သစ်သားပန်းပုများ၊ အဝတ်အထည်များ၊ ပိုးထည်များနှင့်အခြားအရာများပြုလုပ်ကြသည်။ သင်ပင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသွားရောက်နိုင်သည်။ ၃၂၂၊ ၁၀A လမ်းတွင်ရှိပြီး ၂၇၈ ၁A လမ်းရှိလက်လီဆိုင်တစ်ဆိုင်လည်းရှိသည်။ နံနက် ၈ နာရီမှညနေ ၅ နာရီအထိဖွင့်သည်
ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုလဲ ထွက်သွားပါ စျေးဝယ် စီရမ်ရိ အသီးအနှံကိုရိတ်ရ o စီရမ်ရိ Riep? ၎င်းသည် Siem Riep ပြည်နယ်၏မြို့တော်ဖြစ်ပြီးရှေး Angkor မှ ၈ ကီလိုမီတာသာဝေးသည်။ ဒါကြောင့်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေအမြဲတမ်းရှိနေတယ်။
အနုပညာပြခန်းများ၊ ဖက်ရှင်ဖက်ရှင်ဆိုင်များ၊ အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များနှင့်နေရာကောင်းများရှိသည် လက်ဝတ်ရတနာ၊ ငွေထည်၊ ယွန်းထည်၊ ကျောက်တုံးနှင့်သစ်သားပန်းပု၊ နှင့်အများကြီး
အကောင်းဆုံးစျေးကွက်ဗဟိုတွင်အာရုံစူးစိုက်နေကြသည်သူတို့သည်နေ့တိုင်းဖွင့်လှစ်ပြီးအရာအားလုံးကိုရောင်းချကြသည်။ ဤရွေ့ကားစျေးဝယ်သူများ၏အစားအစာဆိုင်ခန်းများနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲများပါဝင်သောပွင့်လင်းသောစျေးကွက်များဖြစ်သည်။ Haggling တရားဝင်ဖြစ်ပါတယ်.
အဲဒီမှာ ပျံကျဈေး Angkor ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများမှထုတ်လုပ်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းချသည့် ၀ ါးကုန်တယ် ၂၀၀ နှင့်အတူအဝတ်အထည်၊ ပိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပန်းချီကားများ၊ ရုပ်သေးများ၊ ပြန်လည်အသုံးပြုထားသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအိတ်များ၊
El Old Market or Phsar ချတ် ထမင်း၊ ပေါင်မုန့်နှင့်ဖားဖားအထိကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အစားအစာများကိုရောင်းချသည်။ နံနက် ၇ နာရီမှည ၈ နာရီအထိဖွင့်သည်
အခြားတစ်ဖက်တွင်စနေနေ့၊ တနင်္ဂနွေနှင့်အင်္ဂါနေ့တိုင်းတွင်၎င်းသည်ပြင်ပစျေးကွက်ဟုခေါ်သည် လုပ် in ကမ္ဘောဒီးယား။ ဒေသခံလက်မှုပညာရှင်များရှိပြီးအဝတ်အထည်၊ လက် ၀ တ်ရတနာ၊ ပန်းချီကားနှင့်ကစားစရာများသည်အခြားစျေးကွက်များထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ စျေးနှုန်းလည်းပါ ၀ င်ပါတယ် မင်းအရည်အသွေးကောင်းတယ်
siem reap- ၏ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံ
နောက်ဆုံးသင်လက်မှုအနုပညာကိုနှစ်သက်သော်လည်းလက်မှုပညာရှင်များထံမှ၎င်းတို့ကိုတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူလိုပါကသင်သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည် ၏လက်မှုပညာအသင်း Angkor။ ၎င်းသည်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ဈေးဆိုင်ခန်း ၂၀ တွင်ခင်းကျင်းပြသသည့်အရောင်းဆိုင်များကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းသောလက်မှုပညာရှင်များသို့ရောင်းချသည်။ ၎င်းသည်လမ်းကြောင်း ၆၀ ရှိလေ့ကျင့်ရေးရွာတွင်ဖြစ်သည်။
သေချာတာပေါ့ကမ္ဘောဒီးယားမှာစျေးဝယ်ထွက်ဖို့နေရာတွေပိုများပေမယ့်ဒီဟာတွေဟာအခြေခံအကျဆုံးဖြစ်ပြီးခရီးသွား most ည့်သည်အများဆုံးမြို့နှစ်မြို့မှာအကြံပြုထားပါတယ်။ အမြဲတမ်းရောနှောနေခြင်းကိုသတိရပါ၊ ရောင်းသူကသင့်ကိုပြောသည့်ဈေးနှုန်းအတိုင်းမနေပါနှင့်၊ အကယ်၍ သင်သည်မှားယွင်းသောသူများထံမှမှန်ကန်သောသူများကိုမည်သို့ခွဲခြားသိနိုင်မည်ကိုမသိပါကလက်ဝတ်ရတနာများကိုမည်သည့်အခါမျှမဝယ်ပါနှင့်။ နောက်မှ ကမ္ဘောဒီးယားမှာစျေးဝယ်ရတာပျော်စရာပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာရှခရီးသွားခြင်း » ကမ္ဘောဒီးယား » စျေးဝယ်ခြင်းသည်ကမ္ဘောဒီးယားတွင်ပျော်မွေ့သည်
နယူးဇီလန်ရှိ Hobbiton သို့သွားရောက်ပါ
Wall Street ၏နွား